सुजुकीको के – सिरिज इन्जिन, के हो ? के छन् विशेषता ? | Automotive News Nepal
सुजुकीको के – सिरिज इन्जिन, के हो ? के छन् विशेषता ? १९ कार्तिक, २०७६
ग्राहकका चाहनाहरु परिवर्तन भइरहन्छन् । बढ्दो प्रतिष्पर्धा र ग्राहकको चाहना अनुसार अटोमोबाइल इन्जिन निर्माताहरुले पनि उच्च दक्षतायुक्त, वातावरणमैत्री, भरपर्दो र उच्च शक्तिशाली इन्जिनको निर्माण र निर्यात गर्नुपर्ने चुनौती बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सुजुकी कम्पनीले केही समयदेखि के –सिरिज इन्जिनको विकास गरेको छ ।
सुजुकीले आफु सधै ग्राहकको सेवामा समर्पित भएको र यसै अनुसार आफ्नो धेरै साधनश्रोतलाई अनुसन्धान र विकासका लागि खर्च गरिरहेको दावी गर्छ । निरन्तर अनुसन्धानको परिणाम स्वरुप सुजुकीले इन्धन र शक्तिको सर्वोत्तम मिलन भएको के – सिरिज इन्जिनको निर्माण गरेको छ । कार निर्माताहरुको इन्जिन हेर्दा के – सिरिज सबैभन्दा उच्चतम इन्जिन हो । यसले कार निर्माणको खर्च र उत्पादन गर्ने प्रदुषणमा कमी ल्याएर यसको शक्ति र माइलेजलाई सुधार गर्छ । यो इन्जिनले भारत स्टेज चौथोको स्ट्यान्डर्डलाई पालना गर्ने किसिमले निर्माण गरिएको छ । ९९८ सीसीको यो इन्जिनले ८७ एचपी भन्दा बढीको शक्ति दिन्छ, जुन शक्ति यो भन्दा पहिले १२०० सीसीको इन्जिनले मात्र दिन सक्थ्यो । यसले प्रत्यक्ष रुपमा इन्धन खपत र वायु प्रदुषणमा पनि कमी ल्याउछ ।
अहिले के – सिरिज इन्जिनका २ मोडल उपलब्ध छन् । एउटा KB १० हो, जुन ९९८ सीसी र ३ सिलिन्डरको पेट्रोल युनिटमा उपलब्ध छ । अर्को KB १२ हो, जुन १२०० सीसी र ४ सिलिन्डर पेट्रोल युनिटमा उपलब्ध छ । यो इन्जिनको विकास गरे पछि मारुती सुजुकीले आफ्ना सबै पुराना गाडीमा समेत यी इन्जिन अप्सन अपग्रेड गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छ । यसको ए स्टारदेखि शुरु गरेर एस्टिलो, वागन आर र अल्टो सम्ममा KB१० भर्सनको इन्जिन प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी स्वीफ्ट र स्वीफ्ट डिजायरमा पहिले भएको १३०० सीसीको इन्जिनका सट्टामा १२०० सीसीको KB १२ भर्सनको इन्जिन प्रयोग गरिएको छ । यसले रिट्जमा पनि काम गरिरहेको छ ।
के – सिरिज इन्जिन सम्पुर्ण रुपमा आल्मुनियमद्धारा निर्माण भएको छ, जसले गाडीको सम्पुर्ण तौललाई हल्का बनाउनमा पनि भुमिका खेलेको छ । त्यसैगरी यसले ड्राइभरलाई सुविधाजनक रुपमा गाडी हाक्न पनि सहयोग पुर्‍याउछ । सुजुकीले निरन्तर रुपमा के – सिरिज इन्जिनको निर्माण गरिरहेको छ । वार्षिक रुपमा ५ लाख के – सिरिज इन्जिनको निर्माण गरिरहेकोमा अहिले आफ्नो निर्माण क्षमतामा वृद्धि गरी थप २ लाख इन्जिन समेत निर्माण गर्ने क्षमताको विकास गरिरहेको छ । यो योजना सन् २०१२ सम्ममा पुरा भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
अत्याधुनिक के – सिरिज इन्जिन निर्माण सुविधा भारतको गुरगाउमा अवस्थित कम्पनीको प्लान्टमा छ । भारत र जापानमा कम्पनी अन्तर्गत सुजुकी इन्जिन डिजाइन समुहका इन्जिनियरहरुले यसको डिजाइन, निर्माण र परिक्षण गर्छन् । नेपालमा सुजुकीका कारहरु अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल टेडर्सले बिक्री वितरण गरिरहेको छ । ती मध्ये केहीमा के – सिरिज इन्जिन प्रयोग गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार जेन एस्टिलो, ए स्टार, स्वीफ्ट, रिट्ज र डिजायरमा के – सिरिज इन्जिनको प्रयोग गरिएको छ । यो इन्जिन प्रयोग भएका अन्य मोडलका कारमा पनि छिटै नै उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
रुपन्देहीमा अन्तरपालिका सार्वजनिक यातायात सेवा
काठमाडौं - रुपन्देहीका ९ वटा स्थानीय तहका जनतालाई स्तरीय यातायात सेवा दिने उद्दे...
विश्व बैंकको प्रतिनिधिमण्डल तथा नासा पदाधिकारी बीच भेटघाट
काठमाडौं-सडक सुरक्षा , ट्रान्सपोर्ट ,यातायात व्यबस्थापन तथा दिगो विकास एक अर्काक...
सरकारकै लगानीमा बन्ने भयो सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइ ओभर’
काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै स्रोतबाट सुरुङ...
साउन १ पछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रारम्भ गरिने, विभागले निकाल्यो सूचना
काठमाडौं - यातायात व्यवस्था विभागले पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि आ...